Hogaamiyaha Maamulka Jubba Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa Fartaag oo isku haya dhameystirka Maamulka Jubba – idalenews.com
Hogaamiyaha maamulka Jubba Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo 28-kii bishii August shir socday dhowr cisho loogu aqoonsaday Hogaamiyaha Jubba iyo ku xigeenkiisa Gen C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa khilaaf xoogan oo salka ku haya dhamaystirka maamulka Jubba soo kala dhex galay.
Illo lagu kalsoonyahay ayaa u sheegay warbaahinta Idale News Online khilaafku inuu yimid kadib markii labada masuul isku qabteen xiliga la dhamaystirayo qaybaha kale ee Maamulka kuwaasoo baryihii u danbeeyay ay dadka dagan deganada Jubbooyinka wada sugayaan xiliga rasmiga ah ee la dhamaystirayo Maamulka.
Khilaafka labada masuul ayaa lagu soo waramayaainuu yahay mid ay kala taageersanyihiin dowladaha Ethiopia iyo Kenya kuwaasoo mid walba ay doonayso danaheeda gaarka ah inay ka fushato Jubbooyinka, balse Gen C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo taageero ka helaya dowladda Ethiopia ayaa ku adkaystay inaan la dhamaystirayn maamulka inta laga xalinayo khilaafka u dhexeeya Siyaasiyiinta Jubbooyinka iyo maamulka Jubba.
Axmed Madoobe ayaa isagana dhankiisa dadaal badan ugu jira sidii aan loo tegi laheyn shirka Muqdisho islamarkaana loo soo dhisi lahaa qeybaha ka dhiman maamulka Juba, iyaddo arrintaasi ay ku raacsan yihiin madaxda ciidanka Kenya ka jooga magaalada Kismaayo.
” Fartaag iyo Madoobe waxaa hadda muuqata labadooda inay is mari la’yihiin. Maxaa yeelay waxa midna uu taagan yahay maamulka aan dhameystirno inaga oo aan u joojin siyaasiyiinta cabashada qaba iyo shirka Xamar, halka midka kale ee leeyahay waa in xal aan u raadinayo dadka waxtabanaya kadibna aan maamul dhisnaa. Kenya iyo Ethiopia ayaana labadaasi fikir kala taageersan” ayuu yiri siyaasi ku sugan Kismaayo oo xaalad amaan darteed magaciisa aanan qori karin.
Kismaayo ayaa waxaa laga dareemayaa dareen siyaasadeed maamulka Juba soo kala dhex galay, waxaana socda dadaalo labada mas’uul loogu kala dabqaadayo si ay mar kale isku mowfiq uga wada noqdaan fikirka siyaasada ee lagu soo dhisayo maamulka Juba.
Horey ayey muran iyo mugdi soo kala dhexgalay ragii wada dhistay maamulka Juba qaarkood uga baxeen sida Awlibaax, halka raga ay ku jiraan Ali Madoobe iyo Yaasiin Raadeer ay khilaaf jira dartood looga waahay saaxada maamulka ee Juba.
Lama yaqaan sida xaalka Kismaayo iyo maamulka aan dhameystirneyn ee muranka ku jira ilaa maalintii lagu dhawaaqay uu noqon doono haddii uu sii socdo khilaafka la sheegay inuu soo kala dhexgalay Fartaag iyo Axmed Madoobe.
Idale News Online Kismaayo